जापानमा श्रीमतीसहित बस्दै आएका एक नेपालीले गरे आ’त्मह’त्या ! - Thulo khabar
जापानमा श्रीमतीसहित बस्दै आएका एक नेपालीले गरे आ’त्मह’त्या !
जापानको खानागावा प्रिफे’क्चरमा एक नेपाली युवाले आफ्नो ज्यान आफैंले लिएका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार खानागावा प्रिफे’क्चर मिदोरी वार्डको नागा’चुता भन्ने ठाउँमा गैरे थरका युवाले आफ्नो ज्या’न आफैंले लिएका हुन्।
नेपाल बुटवल घर हुनुभएका गैरे जापानमा व’र्किगं भिषामा रहँदै आएका थिए । श्रीमती सहित बस्दै आएका गैरेले सेप्टेम्बर २६ तारिख आईतबार साँझ ज्या’न फा’लेका हुन् । अन्दाजि ३५ बर्षिय गैर आफु बस्दै आएको घरको सिँढिमा झु’ण्डि’एको अवस्थामा मृ’त भेटि’एका हुन् ।
हाल श’व प्रहरी नियन्त्र’णमा रहेको र प्रहरीले छा’नविन तथा पो’ष्टमा’र्टम लगाएको प्रक्रिया गरिरहेको बताइएको छ ।जापानमा आफ्नो ज्यान आफैले लिने नेपालीहरुको संख्या बढिरहेको छ । जापान जस्तो बिकसित देशमा आफुले आफैलाई मानसिक रुपमा स्वास्थ्य राख्न एकदमै जरुरी रहन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का र भारतका-विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता ।
काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७७औँ महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको ने’तृत्व गर्दै हाल न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र भारतका बाह्य मामिलामन्त्री डा. एस जयशङ्करबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।
“दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले कोभिड–१९ ले नेपाल र भारतका जनताको जीवन र आजिविकामा निम्त्याएको चुनौतीको मिलेर सामना गर्न सहमति जनाउनुभयो ।” नियोगले केही बेरअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री डा खड्काले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका निम्ति भारत सरकारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
आजै मन्त्री डा खड्काले नेपालको महावाणिज्य दूतावासको निरीक्षण गरी प्रभावकारी ढङ्गले क’१न्सुलर सेवा प्रवाह गर्न तथा आर्थिक, कूट’नीतिलाई विशेषरुपमा ~अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।